တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုႈသ႕နံၚ (လါမဥရွဥ ၂၅ယ၂၀၂၀) | Radio Veritas Asia
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုႈသ႕နံၚ (လါမဥရွဥ ၂၅ယ၂၀၂၀)
Wednesday (March 25): "You have found favor with God"
Meditation: ကစႈဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ အတႈပနီဥ တႈလီၚလးလ႕ ပအိဥဒ္လဲဥ’ လ႕လံဏတႈစံးထီဥပၾတ႕ၚအပူၚ ပဃ့ထုကဖဥတႈလ႕ (ဎြၚဧ႕ ဒုးနဲဥဎၚလ႕ နတႈပနီဥလ႕တႈဂ့ၚ ဒီးဎၚတက့ႈ’ (Psalm 86:17). လ႕လံဏတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ အလီႈလံၚအပူၚ ဎြၚမၚဖ်ါထီဥ တႈပနီႈလီၚလးအါမးဒီး တႈလီၚကမ႕ကမဥဆူ ဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ အတႈအဲဥတႈကြံအဂ့ႈ ဒီးသးကညီၚ၀ဲ အပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’
ဒ္အပွၚဂီႈမုဥသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈမၚပူၚဖ်ဲးအီၚလ႕ ကုႈအလီႈဖဲ ကီႈအံၚကေံဥပတူအပူၚဒီး တႈလီၚလးဒုးနဲဥ အ၀ဲသ့ဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥလဲၚခီဂဏ၀ဲ ပီဥလဲဥနံၚအခ႕ဥသး ဒီးမဲးမုဥပ်ီ အဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲကီႈဎူဒးအကစီၚပၚ (Ahaz) ဒိးန႔ႈဘဥတႈစိတႈကမီၚ အလီႈအလၚ လ႕(David) အအိဥခါ (David) ဘဥတႈ၀းတရံးအီၚ က၀ီၚဃဏအီၚလ႕ ပွၚသုးမုႈသံဥဘိတဖဥ ဒ္သိးကမၚဟးဂီၚကြံဏအီၚဒီး အပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ဎြၚလီဥဖ်ါထီဥ အတႈပနီဥ လ႕ကမၚလီၚမဥကြံဏ အတႈသးဒ့ဒီ လ႕ဎြဏတပဏလီၚတဲဏအီၚ တသါပ့ၚနီဥ အတႈအ႕ဥလီၚ လ႕အအ႕ဥလီၚ (David)ဒီး အပွၚဂီႈမုဥ သ့ဥတဖဥဘဥန႔ဥလီၚ’ ဒ္လဲဥဂ့ၚဒ္လီဥဂ့ၚ ကစီၚပၚ (Ahaz)န႔ဥ အတႈမုႈလႈလ႕ဎြၚအိဥန႔ဥ လီၚမႈကြံဏ၀ဲ ဒီးသမ႕၀ဲဎြၚ ဃ့၀ဲဎြၚလ႕ ကနဲဥဖ်ါထီဥ အတႈပနီဥစီဆွံန႔ဥလီၚ’ ဎြၚတပဏဖ်ါထီဥ တဟ့ဥအီၚလ႕ အတႈပနီႈနီတမံၚလ႕ အီၚဒီး အပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥ အက်ါဘဥလီၚ’
ဎြၚဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ အတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚ တႈရဲဥတႈက်ဲၚ’
ပထံဥဘဥ၀ဲ ပွၚအံစရ့လးဖိသ့ဥတဖဥ အတႈလ႕ထီဥပွဲၚထီဥ ဒ္၀ံအတႈတဲပဏစ႕ၚ တႈလ႕ညါခီ ဒီးဎြၚဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ အတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚ အတႈရဲဥတႈက်ဲၚ ဖဲလ႕တႈအိဥသး လ႕ကဆွ႕အီၚလ႕ ဟံန႔ႈ၀ဲပွၚကညီ အတႈကဲအသိးယ မဲစံဎၚစီၚပၚ လ႕ဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲတဂၚအအိဥန႔ဥလီၚ’ တႈအနံဥအလါ အဆ႕ကတီႈလ႕ အစးထီဥအသးဖဲတႈမၚအသးလ႕ အတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚ စးထီဥအသးဃုဏဒီး တႈလ႕အလီၚလိႈလီၚလးလ႕ နီႈမၚရံဎၚ အိဥထီဥအဟုးအသးယ ဒ႕ထီဥ၀ဲ
ကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏန႔ဥလီၚ’ ဖိသဥလ႕ကအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲတဂၚ ဘဥဒ႕ထီဥ၀ဲလ႕ တႈဘ်ဴးတႈဖွိဥ အတႈအိဥသး နီႈမၚရံဘဥဒ႕ထီဥ၀ဲ လ႕သးစီဆွံန႔ဥလီၚ’ ပွၚမုဥကနီၚအမံၚမ့ႈ နီႈမၚရံလီၚ ဒီးကလူးလဲၚႏုဏဆူအအိဥဒီးစံး၀ဲဒဥ ပွၚလ႕အဘဥဘ်ဳးအါတဂၚဧ႕ယ ဎြၚအိဥဒီးနၚလီၚ လ႕ပိဏမုဥအက်ါန႔ဥ နဘဥဆိဥဂ့ၚနဲလီၚ’’ (Luke 1:28). နီႈအ့ဥအုမ့ႈ ပွၚဟီဥခိဥဖိ ပွၚကညီန႔ဆ႕ဥအမိႈ အတႈဟဲ၀ံအ႕လ႕ လီၚဘဥဆူ တႈဒဲးဘးအပူၚန႔ဥလီၚ’ ခဲအံၚ နီႈမၚရံဎၚ ကဲထီဥက့ၚ၀ဲ မိႈနီႈအ့ဥအူ လ႕အသီတဂၚ လ႕ကအံက့ၚကြႈက့ၚပွၚ ဒ္အဖိအလံၚတံႈနီႈအသိး ဃုဏဒီးတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥ န႔ဥလီၚ’ (Romans 5:12-21). ဒီးကြႈကြႈ နကဒ႕ထီဥဒီး နကဆံးစႈန႔ႈ နဖိခြါဒီးနကဘဥဎုႈန႔ႈ အမံၚလ႕ဎ့ဥရွဴးလီၚ’ (Luke 1:31-32), အခီပညီမ့ႈ၀ဲ (ကစႈဎြၚ အတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚတႈ) အ၀ဲကအုဥက့ၚခီဥက့ၚ အပွၚဂီႈမုဥ လ႕တႈဒဲးဘးအပူၚလီၚ’ (Matthew 1:21). မူခိဥကလူးန႔ဥ စံးဘဥနီႈမၚရံၚဎၚလ႕ စီၚဒၚ၀ံးအဖိမုဥနီႈမၚရံဧ႕ယ ဒီးကြႈကြႈ နကဒ႕ထီဥဒီး နကဆံးစႈန႔ႈ နဖိခြါဒီးနကဘဥဎုႈန႔ႈ အမံၚလ႕ဎ့ဥရွဴးလီၚ’
အ၀ဲဒဥန႔ႈကမ့ႈပွၚအဒိဥဒီး ကဘဥတႈကိးအီၚလ႕ တႈအထီကတ႕ႈအဖိခြါလီၚ’ ဒီးဎြၚကဟ့ဥအီၚလ႕ အပႈစီၚဒံး၀ံး အလီႈပစိၚ ဒီးကပ႕စီၚဎဏကိဏအဟံဥ အစိၚစိၚအဃဥဃဥလီၚ’ ဒီးအဘီအမုႈန႔ဥ အကတ႕ႈတအိဥဘဥ၀ဲဘဥလီၚ’ (Luke 1:32-33). နီႈမၚရံကစက့ၚစံးဆ႕က့ၚ ဎြၚဒ္လဲဥ လ႕မူခိဥကလူး ကၚၾဘံးအဲလး စံးဘဥအီၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလဲဥ’ အ၀ဲမုဥသ့ဥညါ၀ဲလ႕ အနႈဟူဘဥ၀ဲယတုႈဘဥ၀ဲတႈတမံၚမံၚ လ႕အမဲဏညါ ဒ္အမ့ႈ၀ဲပွၚဟီဥခိဥတဂၚ အတႈသ့န႔ႈအိဥန႔ႈအသိးလီၚ’ တႈအံၚမ့ႈတႈလီၚလၚ အနီႈကီႈမၚအသးလ႕ အပူၚကြံဏသ့ဥတဖဥ ဎြၚမၚတႈ၀ဲတႈလီၚလးန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲမုဥတႈသံကြႈမ့ႈ၀ဲ တႈအံၚ ကကဲထီဥအသးဒီးဎၚဒ္လဲဥ မ့ႈလ႕ဎမ့ႈပွၚမုဥကနီၚတဂၚ ဎတဘဥဃးဒီးပွၚပိဏခြါနီတဂၚဘဥ (ဎ၀ၚ)တအိဥဘဥအဃိန႔ဥလီၚ’
အ၀ဲမုဥမ့ႈပွၚတဂၚ နီႈကီႈလ႕ အနႈဟူဘဥဎြၚအတႈကတိၚ တႈကိးဒီး အ၀ဲမုဥက့ၚစံးဆ႕က့ၚ၀ဲတဘ်ီဃီ ဃုဏဒီးတႈစူဏတႈနဏ တႈမုႈလႈ တႈနဏန႔ႈအီၚအပူၚန႔ဥလီၚ’ နီႈမၚရံၚ အတႈစံးဆ႕က့ၚတႈ လ႕အခ်႔သဒံးန႔ႈမ့ႈ၀ဲ (မ့ႈ Yes)လီၚ’ တႈအံၚမ့ႈ၀ဲ တႈဒုးနဲဥဒိတဲဏ လ႕အဂ့ၚလ႕ ပွၚစူဏနဏတႈဖိ သ့ဥတဖဥအဂီႈလီၚ’ နီႈမၚရံ အ၀ဲမ့ႈတထံဥဘဥ တႈကဲထီဥအသးဘဥဆဥ အ၀ဲနဏ၀ဲဎြၚ အတႈအ႕ဥလီၚအီၚလီၚ’
အ၀ဲမုဥလ႕ပွဲၚဒီး တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥ အဂ့ႈဒ္အံၚ မ့ႈလ႕အ၀ဲစူဏနဏ၀ဲ ဎြၚအတႈစံးဘဥအီၚ လ႕အမ့ႈအတီဒီး လ႕ထီဥပွဲၚထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲအသးအိဥ၀ဲ သပွႈကတ႕ႈလ႕ အတႈသူဥဟူးသးဂဲၚအပူၚ လ႕ပမၚဎြၚအတႈမၚန႔ဥလီၚ’ တုၚဒဥလဲဏအ၀ဲမုဥ မ့ႈထံဥဘဥ တႈကီတႈခဲ မ့တမ့ႈ တုၚဒဥလဲဏလ႕ မ့ႈဘဥဟ့ဥလီၚအသးသမူ အဂီႈဒဥလဲဏန႔ႈလီၚ’ နီႈမၚရံၚဎၚန႔ႈ မ့ႈ၀ဲဎြၚအမိႈ အဂ့ႈဒ္အံၚ ဖဲဎြၚဟံန႔ႈ၀ဲ ပွၚကညီအတႈကဲ ဖဲအဘဥဒ႕ထီဥ၀ဲလ႕ အဟ႕ဖ႕ပူၚအခါန႔ဥလီၚ’ ဖဲပစံး၀ဲ တႈမ႕ဖိအတႈစူဏတႈနဏ အတႈဂ့ႈမိႈပွႈ တႈထုကဖဥအခါ ပစးထီဥ၀ဲ ပတႈတဲလီၚက်ဲၚလီၚ ပတႈဒဲဘး အဂ့ႈမိႈပွႈန႔ဥလီၚ’ လ႕ပဂီႈဒီး လ႕ပတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအဂီႈ အ၀ဲဘဥဟဲလီၚ၀ဲဆူမူခိဥ လ႕သးစီဆွံအစိကမီၚ အ၀ဲဘဥဟံန႔ႈ၀ဲ ပွၚကညီအတႈကဲ တႈအိဥမူ လ႕ပွၚမုဥကနီၚသဘ်႔ နီႈမၚရံဎၚအိဥ ဒီးကဲထီဥ၀ဲပွၚကညီန႔ဥလီၚ’
ဎြၚဟ့ဥပွၚတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥဒီး အ၀ဲမုႈလဏ၀ဲလ႕ ပကစံးဆ႕က့ၚအီၚ လ႕တႈသူဥအိဥ သးအိဥအပူၚ တႈဒိကနဥအပူၚ ဒီး အိဥဒီးသးတႈစူဏတႈနဏ ဒ္နီႈမၚရံဎၚအသိး န႔ဥလီၚ’ ဖဲဎြၚဟ့ဥလီၚတႈကလုႈ လ႕ပကဘဥမၚအခါန႔ဥ အ၀ဲဟ့ဥစ့ႈကီးပွၚဒီး တႈမၚစ႕ၚယ တႈဂံႈတႈဘါယ ဒ္သိးပကစံးဆ႕က့ၚအီၚ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ ပသ့အိဥမူဃုဏဒီး အတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥ မ့တမ့ႈ ပလဲၚဒဥပကစႈက်ဲသ့၀ဲန႔ဥလီၚ’ မ့ႈနစူဏနဏလ႕ဎြၚအတႈ အ႕ဥလီၚအီလီၚ ဒီးမ့ႈနအိဥမူလ႕ ဎြၚအတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥ အပူၚန႔ဥဧါ’
ပႈကစႈဎြၚ အိဥလ႕မူခိဥထးတဂၚဧ႕’ နဟ့ဥလီၚပွၚ နတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥယ တႈသးကညီၚယ ဒီးနတႈပ်ႈကြံဏ ပတႈဒဲဘး ခီဖ်ိလ႕နဖိခြါယ ပကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏ အိဥန႔ဥတက့ႈ’ မၚစ႕ၚဎၚ ဒ္သိးဎကအိဥမူ လ႕တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥ တႈဆိဥဂ့ၚ မၚလ႕ထီဥပွဲၚထီဥဎ တႈအိဥမူ ဒ္နီႈမၚရံဎၚအသိး လ႕အအိဥဒီးတႈစူဏနဏ တႈအ႕ဥလီၚဒီး လ႕ဎကဟ့ဥနၚ ဎတႈစံးဆ႕နၚ လ႕အဘဥဒ္အမ့ႈ၀ဲ (မ့ႈ Yes) လ႕နတႈဘဥသး ဒီးတႈရဲဥတႈက်ဲၚ လ႕ဎတႈအိဥမူ အပူၚန႔ဥတက့ႈ’